Daacish oo iyaga dhexdooda is laayeen
Kooxda Daacish ee awoodda ka dhex raadinaya gudaha Soomaalya ayaa lagu soo warramayaa inay u kala jabtay labo qeybood kuwaasoo dagaal culus uu dhawaan dhex maray.
Khilaafka soo kala dhex galay Kooxda gacan saarka la leh kooxda la magacdey Dowladda Islaamka ee ka howlgasha wadamo ay kamid yihiin Suuriya iyo Ciraaq ayaa salka ku hayo cidda hoggaanka u qabaneyso maadaama uu xanuunsanayo hoggaamiyahooda Cabdulqaadir Muumin kaasoo hadda ka hor kasoo goostay kooxda al-Shabaab.
Hoggaamiyaha Daacish horayna uga mid ahaa Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Ingiriiska ayaa lasoo sheegayaa inuu la xanuunsanayo cudurka sokorta oo muddooyinkii u dambeeyey ka dhigay mid kusoo aruuray sariirta.
Sida ay dadka deegaanka u xaqiijiyeen warbaahinta, dagaalka oo ka dhacay buuraha Calmiskaad ayaa waxaa ku dhintay illaa 3 dagaalyahan oo ka tirsan kooxaha dagaalamay ee Daacish dhexdooda ah sidoo kalana waxaa ku dhaawacmay tiro intaas ka badan.
Kooxaha argaggixisada ah ee ka dagaallamaan Soomaaliya dhammaan xubnahooda waa calooshood-u-shaqeystayaal raadinayaan awood si awooddaas ugu sheegtaan shacabka Soomaaliyeed ugana dhacaan hantidooda, wax diin ah ay leeyihiinna ma lahan.
Dagaallaada mar walba iyaga dhexdooda ka dillaacaan waxay caddeyn u tahay in midba midka kale uu ka awood badnaado si dabeetana uu milkiyo maalka shacabka Soomaaliyeed ee maalin walba ay dhacaan.